BackGround History » Computer University (Pakokku)
Computer University, Pakokku was launched on 21st January, 2002. It was changed into university from colleage on 20th January, 2007. It is situated near by Tingut village and Kanhla village in Pakokku Township. It’s in north of Pakokku – Pauk Main Road and 6.6. Miles far from Pakokku. Dr. Tin Tin Thein, Ph.D(IT), Associate Professor, serves temporarily asaprincipal of this institution.
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ) ကို အစိုးရကွန်ပျူတာကောလိပ်အဖြစ် ၂၀၀၂ခုနှစ်၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၁) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ခုနှစ်၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၀)ရက်နေ့တွင် တက္ကသိုလ် အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းတည်နေရာမှာ ပခုက္ကူ-ပေါက်ကားလမ်းမ ကြီး မြောက်ဖက်၊ ပခုက္ကူ မြို့နှင့် (၆)မိုင်၊ (၆)ဖာလုံ အကွာ၊ တင်းဂါတ်ကျေးရွာ အုပ်စု၊ တင်းဂါတ်ကျေးရွာ နှင့် ကံလှကျေးရွာအုပ်စု၊ ကံလှ ကျေးရွာအနီးတွင် တည်ရှိပါသည်။ ယခုတွင် ခေတ္တကျောင်းအုပ်ကြီး အဖြစ် ဒေါက်တာတင်တင်သိန်း ပါမောက္ခချုပ်(တာ၀န်)/ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်၊ Ph.D(IT) မှ တာဝန်ထမ်းဆောင် လျက်ရှိပါသည်။
It is located near by Tingut village and Kanhla village in Pakokku Township. It’s in north of Pakokku – Pauk Main Road and 6.6. Miles far from Pakokku. It is 62.5 acres of land.
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)သည် ပခုက္ကူ-ပေါက်ကားလမ်းမကြီး မြောက်ဖက်၊ ပခုက္ကူမြို့နှင့် (၆)မိုင်၊ (၆)ဖာလုံ အကွာ၊ တင်းဂါတ်ကျေးရွာ အုပ်စု၊ တင်းဂါတ်ကျေးရွာ နှင့် ကံလှကျေးရွာအုပ်စု၊ ကံလှ ကျေးရွာအနီးတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)၏ အကျယ်အဝန်းမှာ ( ၆၂.၅ ) ဧက ကျယ်ဝန်းပါသည်။
Copyright © 2016 University of Computer Studies (Pakokku). All Rights Reserved.